Maamulka Khaatumo oo wadahadal la furay Somaliland, akhriso magacyada wasiirada Khaatumo uga qaybgalaya wadahadalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ayada oo mudooyinkii ugu dambeeyayba ay dagaalo ku dhex marayeen deegaanada gobolka Sool ciidamo kala taabacsan maamulada Khaatumo iyo Somaliland, ayaa waxaa soo baxayso inay labadaasi maamul wadahadalo u bilowdeen.
Wasiirka warfaafinta Khaatumo ayaa sheegay inay xubno ka tirsan wasiirada maamulkooda ay wadahadal ugu suganyihiin magaalada Caynaba oo ay Somaliland maamusho.
Baashe Cali Jaamac oo ah wasiirka biyaha Somaliland ayaa todobaadkii hore sheegay inay wadahadalada ay la furayaan maamulka Khaatumo ka dambeysay kadib markii ay kuwada kulmeen magaalada Addis ababa e exarunta dalka Itoobiya.
Cali Khaliif Galayr, madaxweynaha maamulka Khaatumo oo ku sugan magaalada Buuhoodle ayaanan weli ka hadlin wadahadalka u furmay maamulkiisa iyo maamulka Somaliland.
asiirada Khaatumo uga qaybgalayo wadahadalka Caynaba ka dhacayo ayaa waxa ay kala yihiin,
Wasiirka Aminiga Khaatumo Kayse Abdi Yuusuf
Wasiirka Arimaha Dibada Maxamuud Ismail Shabac
Ex Wasiirkii Hore Khatumo Yaasiin Axmed Sulub
Ex Xildhibaan SSC Hore Xariir Awcali
Qurba-joog Bashiir Mahdi
Xubin Caaqil Axmed Xasan X Cumar